OnePlus 7T: imewe, njirimara na ọnụahịa nke ekwentị ọhụrụ | Gam akporosis
Onye OnePlus 7T bụzi onye ọrụ ya, ejiri igwefoto zuru oke
Ekwughi ekwu bụ emeghị eme. Anyị maara nke ahụ OnePlus ga-eweta ụdị vitamin nke OnePlus 7 n'oge na-adịghị anya, ma ọ dịla. Na OnePlus 7t ọ bụrịị eziokwu. Ihe nlere nke biara na ebumnuche doro anya nke ịbụ onye na-egbu ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Maka nke a, ọ nwere njirimara na njirimara teknụzụ nke ịdị elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo dị iche iche so isiokwu a, onye nrụpụta Eshia agbakwunyela nkọwa ụfọdụ n'ọkwa mara mma, na mgbakwunye na akụrụngwa siri ike karị, iji mee nke ọhụrụ gị Onye OnePlus 7T bụrụ nhọrọ ị ga-atụle.
Nhazi na atụmatụ OnePlus 7t
Na ngalaba mara mma, anyị na-ahụ ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ. Maka ndị na-ebido ebido, igwefoto igwefoto nwere ọdịdị gbara gburugburu, na-agbaso ụdị ụfọdụ usoro Motorola. Tụkwasị na nke ahụ, ihu na-ewepụta ụdị ọkwa mmiri mmiri, kama iji sistemụ moto dịka OnePlus 7 Pro.
Maka ndị ọzọ, anyị na-ahụ na OnePlus 7T nwere nnukwu nnwekọ ya na onye bu ya ụzọ, ọ bụ ezie na ihuenyo ahụ dị ntakịrị karịa. Ka anyị hụ ngwaike nke na-ezo ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China.
Nka na ụzụ nkọwa OnePlus 7T
Usoro njikwa gam akporo 9
Ihuenyo 6.55 sentimita asatọ na FullHD + mkpebi (2.400 x 1.080 pikselụ) Fluid AMOLED 90 Hz na HDR10 + na 20: 9 ruru
Nhazi Qualcomm Snapdragon 855 + 7nm na 2.96 GHz
Nchekwa n'ime 128 nke 256
Igwefoto na-aga n'ihu 48 megapixel f / 1.6 isi na OIS + EIS + 16 megapixel f / 2.2 obosara ya na 117º akụkụ nke ele + 12 megapixel f / 2.2 telephoto na x2 mbugharị
Igwe n'ihu 16 megapixels f / 2.0 na EIS
Njikọ WiFi 802.11 ac / Bluetooth / USB-C / Dual SIM / GPS / GLONASS
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihuenyo mkpisiaka ihe mmetụta / NFC / Ihu ude
Batrị 3.800 mAh nwere 30W WARP Charge 30T
Akụkụ 60.9 x 74.4 x 8.1 mm
Ahịa Euro 489 maka mgbanwe ụdị 128 GB / 515 euro maka mgbanwe mgbanwe ụdị 256 GB
N'okwu a, akwụkwọ akụkọ ndị ọhụrụ na-abịa na nhazi ọhụrụ ya Snapdragon 855 +, ọla ọhụụ na okpueze onye America, yana usoro elekere atọ nke na-ekwe nkwa ọtụtụ. Anyị ga-echere maka nyocha anyị nke OnePlus 7t iji hụ ka ọ si arụ ọrụ, mana ọ chọrọ dị elu.
Pricegwọ ya? A na-atụ anya kụrụ ahịa maka euro 489 maka nsụgharị 128 GB na euro 515 iji gbanwee maka OnePlus 7t na 256 GB. ee, ndị a bụ mgbanwe ọnụahịa na India, yabụ o yikarịrị ka ha bụ 499 na 550 euro n'otu n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 7T bụzi onye ọrụ ya, ejiri igwefoto zuru oke
Android 10 Go na-ebupụta ọdịda a na ọtụtụ ndozi
OnePlus kwadoro usoro melite ya na gam akporo 10